IiDoll ezaphukileyo, nguJames Carol. Esinye isihloko esimnyama esimnyama. | Uncwadi lwangoku
Oonodoli abophukileyo. Isuka kuJames Carol. Uchungechunge lweJefferson Winter
Umbhali waseScotland UJames carol (1969) sayina le noveli, Oonodoli abophukileyo, eqhekeka kwindawo emnyama ngempumelelo. Rhoqo kuhlobo olo, ukuba bambalwa kwaye sele siyifundile yonke into efundekayo, Ungasibhala esi siphakamiso sitsha. Y ngakumbi i umlinganiswa omtsha oza kongeza kuluhlu olude lwabaphandi abaqaqambileyo: UJefferson Winter.
Ndiyigqibile izolo ebusuku kwaye khange ihlale iveki. Ngosuku lokuqala, ngaphezulu kwamaphepha ali-150 awile ngaxeshanye, nto leyo edla ngokuba luphawu oluhle kakhulu lwesingqisho kunye nokulutha kwimbali. Akukho nto ilunge njengokuphela kwenyanga yabantu abafileyo uziva ngathi kunokubakho ububi, impambano kunye noloyiko olubi kunokufa.
2 UJefferson Winter
4 Kutheni uyifunda
UJefferson Winter akayonto iqhelekileyo. Hayi njengomphandi okanye njengomntu. Kunye IQ indlela apha ngasentla yomndilili kunye no intuition emangalisayo, ujika abe unyana womnye wababulali abadumileyo baseMelika. Uchithe ubomi bakhe ezama ukuzisusa kwilifa elibi legazi lakhe kwaye wenza konke okusemandleni ukutshutshisa abo bafana notata wakhe. Ukuqala kwenoveli kubonisa kakuhle indlela ephawulwe ngayo lelo gazi.
Unomsebenzi oqaqambileyo kwaye uphumelele kwi-FBI njenge ingcali kwiiprofayili zengqondo. Kodwa uyishiya kwiindlela zakhe ezingaqhelekanga. Ke inikezelwe ekuhambeni ukunceda amapolisa ahlukeneyo ukusombulula ezona meko zinzima.
Eli xesha lingenile Londres. Umhloli waseScotland Yard ebesele emazi ukuba umbiza ukuba asombulule ityala elibuhlungu eliye laxaka wonke umntu: I-psychopath sele ixhwile abasetyhini abane, ibangcungcuthekisa iinyanga. Iwashiye ekhululekile, kodwa ngaphambili uqinisekisa ukuba abanakuxela nto nge inkqubo ekhohlakeleyo: iyazenza ilobotomy. Ubusika kuya kufuneka asebenzise ubukrelekrele bakhe obunelungelo lokubamba isaphuli-mthetho ngaphambi kokuba atshabalalise omnye umfazi.
Ngaphakathi kwigalari ebanzi yabaphandi, abacuphi, abahloli kunye namapolisa avela kwihlabathi liphela, kuyathuthuzela ukuzifumana umoya opholile. Ubusika buhamba naye ngaloo fani. Kwaye iinwele zakhe zimhlophe njengekhephu okoko wafikisa. Wayehlala enxiba isuti, iihempe ezimhlophe ezingenachaphaza kunye neqhina, Oko kukuthi, iyunifomu eqhelekileyo yearhente yeFBI. Kodwa ngoku imalunga nejee, izikipa, izihlangu ezintofontofo, iibhatyi kunye neebhatyi (ahem… ndifuna ukuvakala ngathi ngumntu). Unobunzima kunye nengqele kwaye iLondon iphantsi kwekhephu elikhulu ngaphambi kweKrisimesi.
UCarol ufezekisa ukusondela kwangoko kubuntu bakhe ngenxa yombalisi wokuqala webali. Ngaba iyangena izahluko ezimfutshane, eziphantse zenziwa mfutshane ngakumbi yi isingqisho kunye nokukhululeka kweprozi. Kodwa ikwanika umlinganiswa ophambili kolo ngcelele lwesiko, izithethe okanye iindlela zokuzonwabisa ezinokutsala kakhulu kumlinganiswa. Ke apho iimeko ezintathu sine qua non ubusika bufuna njalo phambi kokwamkela ityala. Ngokufanelekileyo:
Omnye indawo yehotele. Akukho magumbi. Ukuba kufuneka usebenze kwaye ucinge ngokuzingela izilo, kuya kufuneka uyenze ngokukhululekileyo kangangoko kunokwenzeka.
Kubalulekile ukuba isuti inayo Ibhotile entle ye-malt whisky (ubuncinci iminyaka eyi-12).
El Ityala kufuneka linomdla. Kodwa xa eyisombulule, sele ilibalekile ngomnye umntu.
Sidibanisa ukuba Ubusika ungumthandi omkhulu womculo, udlala ipiyano kunye nomqambi amthandayo nguMozart.
URachel Morris utshatile kwaye uyazi ukuba umyeni wakhe akathembekanga kuye. Umhla ongaboniyo, Ihlelwe yi-intanethi, nomntu ongamaziyo lonto imenze alibale monotony yakhe umthatha ayokudibana naye ngobusuku obunye. Kodwa udibana nengcuka eyambethe ufele lwegusha. Ukusuka ekuzikhohliseni uya kuya kwelona phupha limbi ebomini bakhe ngokuba yinombolo yesihlanu.
Ubusika kunye noMark Hatcher, umhloli waseScotland Yard, bazakuphanda amatyala amaxhoba angaphambili, Bonke abaphilayo bafile emva kokuba uqheliso lobototo lwenziwe. Y bonke bephela banamadoda okanye amaqabane nabo abangathembekanga. Ndiza kuzibandakanya nabo iarhente entle kwaye ekrelekrele kakhulu, USophia templeton, Eya kudityaniswa noBusika. Kuyo yonke inoveli i uxinzelelo lwesondo oluxeliweyo phakathi kwezi zimbini kunye neengxoxo zabo zezona zibalaseleyo kule ncwadi.
Khange ndithethe nto. Ukuthula kusoloko kuyeyona ndlela ilungileyo xa umntu obhinqileyo esithi ufuna ukuthetha nawe.
Kuphela ngeedatha ezimbalwa Intuition yasebusika iya kuqala ukusebenza. Ingxaki iya kuba kukuba ukuqiqa kwabo kubonakala ngathi akuvelisi ziqhamo zininzi. Mhlawumbi le ndlela yokuqiqa, ngokuzithemba okugqithisileyo kunye nokugqwesa, inokukhokelela umfundi ukuba athathele ingqalelo uBusika njenge-esile elinekratshi. Kodwa kusenokwenzeka ukuba simthande ngoko nangoko. Ukongeza, uyazi ukuba angaphumelela njani nabani na ofuna ukumnika isandla kwaye abeke abo banekratshi kunaye endaweni yabo.
Kodwa ibhalansi enkulu yale noveli yindlela uCarol angena ngayo ebalini ebusika kunye neyomntu wesithathu xa ebalisa ngokuthinjwa kunye nokuhlukunyezwa kukaRachel Morris. Iseti igcina uloyiko kunye nolindelo kude kube sekupheleni, inomdla kwaye isonjululwe kakuhle. Ayinamsebenzi ukuba yonke into ingavakala ngathi incinci kuthi. Ndiyaphinda ukuba abo bethu abathanda kakhulu uhlobo olumnyama sele bekwazile ukufunda phantse yonke into epheleleyo. Inqaku kukuba sifumana, okanye siqhubeke nokufumanisa, amazwi amatsha okanye iindlela.
Ngenxa yokuba Ihlala incwina, Ngesakhiwo esakhiwe kakuhle nesakhiwe kakuhle. Kuba ubusika bunjalo bakrelekrele kwaye bapholile eklasini. Kodwa iwe kakuhle. Ucinga ngokukhawuleza, unomtsalane kwaye uyazi ukuba ungabuthwala njani ubunzima beemvakalelo ngowuphi umthwalo.
Esi sisihloko sokuqala kuthotho esele sineenoveli ezintandathu. Ndiyathemba ukuba baya kuhlala besiza apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » IiDoll ezaphukileyo, nguJames Carol. Esinye isihloko esimnyama esimnyama.
UFidel Castro kunye noncwadi lwaseCuba